Indlela zephule izinombolo imoto? Kungenzeka yini ukuba aphule imoto ngenani kanye indlela yokukwenza?
Ngezinye izikhathi kunezimo lapho kunesidingo esiphuthumayo ukuze ifohle iye ku inombolo umnikazi wemoto. Lokhu kungase kube sengathi nguye obangela ingozi noma violator traffic. Phela, ngokuvamile endleleni kungenziwa zalungisa noma ukuthukwa ngokuthuka. Nokho, abaningi abazi kanjani ukuba baphule izinombolo imoto kahle. Futhi kwanele xhumana nehhovisi eliseduze noma uMnyango omgwaqo.
Indlela yokuthola umshayeli yenombolo isimo imoto
Uma udinga ngezibhakela umnikazi we-plate ilayisensi, kubalulekile ukufaka isicelo omgwaqo. Kunoma ikuphi, udinga ukubhala isitatimende ngandlela thile. Futhi, i-traffic amaphoyisa omele kumelwe alethe incwadi yokushayela futhi passport sichaze nezizathu zalokho okufanele ukuthola umnikazi wemoto ngokuba inombolo isimo izimoto.
Noma yimuphi legatsha le amaphoyisa omgwaqo kakade unazo walo isisekelo ovamile. Ichaza idatha yazo zonke izimoto esifundeni. Kunezikhathi lapho isicelo sithunyelwa, futhi kwezinye izindawo, isibonelo, uma imoto has a inombolo zokuthutha umphakathi noma bhalisiwe e kwelinye idolobha.
Inombolo yokubhaliswa State umnikazi imoto ithola ngesisekelo imibhalo okufakiwe. Ukuze uthole noma ukuyishintsha, umnikazi imoto kumele anikeze imoto Inqubomgomo TCP MTPL, ungubani ikhadi namanye amaphepha.
Lonke ulwazi oludingekayo singenelwe amaphoyisa semininingwane traffic. Ngenxa yalokho, inani isimo siba uhlobo sokushaya ikhadi wemoto. Ngokusho lezi zibalo, ungakwazi kalula ukuthola hhayi kuphela izibongo igama lokuqala
futhi nesibongo umnikazi, kodwa futhi ifoni ekhaya, nekheli yokuhlala unomphela, yokuhlala, umsebenzi kanye izinombolo cell phone.
Uma inombolo akwaziwa ngokuphelele
Kodwa kanjani ukuba baphule izinombolo imoto, ngaphandle uma incwadi ukhunjulwa isinqamu noma digital?
Kunoma ikuphi, amaphoyisa womgwaqo razyschut umnikazi imoto. Ikakhulukazi uma isimo ihlobene ukuhlukumeza of imithetho yemigwaqo noma ingozi.
Lapho le ngozi yenzeke, noma kunjalo ayikwazi ukushiya endaweni yengozi. Kuyadingeka ukuba sikhumbule inombolo, wenze, umbala imoto, icala ngalesi sigameko. Lokhu kuyadingeka ezimweni lapho umnikazi lifihle kusuka kusayithi ingozi. Udinga ukubuza ofakazi ukulinda ukufika traffic amaphoyisa. Ngokuvamile, izisulu e beshaqekile futhi awukhumbuli kahle imininingwane ebalulekile. Labo wabona ngozi ingase ucacise lonke ulwazi oludingekayo, kuhlanganise inombolo yokubhalisa, lapho isigebengu kutholakala.
Kanjani ukuze ifohle inombolo imoto umzimba
Ukuze imoto ngayinye iduduzekile inombolo kamazisi, kungenjalo VIN-ikhodi. Futhi kubizwa inombolo umzimba. Le khodi ikuvumela ukuba ubone imoto yokuqala, umnyaka woyekelo yayo, kanye neminye imininingwane. Ngezinye izikhathi akwanele nje ukuba baphule imoto isimo. Inombolo ukwazi esidlule wakhe.
Kuphi uthole inombolo kamazisi
Ukuze ngezibhakela imoto, kumele wazi VIN-ikhodi yayo, okuyinto kuvezwa ipasipoti wemoto ngesimo iqoqo izinombolo kanye namagama ngesiNgisi.
Njengoba engqongqoza emshinini uqobo. Lapho ncamashi? Ngokuvamile, inombolo kamazisi kungabonwa kuyi-dashboard ngakwesokunxele. Le khodi kungaba ngisho angabonwa ngokusebenzisa somoya kusuka ngaphandle. Kungaba ingxenye esihlalweni somshayeli ngasemnyango. abakhiqizi abaningi ukusebenzisa VIN-ikhodi futhi ngaphansi hood yemoto.
Indlela ukunquma unyaka inombolo womshini ukuhlonza
Ngena imoto ulwazi olufana idijithi yeshumi VIN-ikhodi, okhombisa ngonyaka imodeli of womshini imoto.
Kuyaphawuleka ukuthi ngokuvamile izimoto akhiqizwa unyaka ngaphambi kosuku olunqunyiwe egumbini. Eyeshumi nanye ikhodi enamadijithi ukuhlonza kubonisa ngenyanga lapho umkhiqizo wadedelwa.
Bheka imishini yokuqala imoto unentshisekelo kulula, njengoba imoto ngezibhakela izinombolo wonke umuntu can. Ngaphezu kwalokho, lolu lwazi kakhulu efanele kulabo bayahamba ukuthenga imoto eyisekeni. Phela, awazi ukuthi ngokuqinisekile ukuthi umdayisi lifihle. Ukuze aphule Imoto ingaba ku database wabelane.
Indlela hlola ipasipoti lobuchwepheshe wemoto
Lolu lwazi ngeke kube usizo kulabo ukuthenga imoto nakho. Yiqiniso, ungathola imoto zombuso. inombolo hhayi sokukhathazeka, ukuthi "engahlanzekile." Nokho, ngezinye izikhathi lokhu kunganele.
By ukuthenga imoto, wavakashela e ukusetshenziswa, ukuya sina. Ngemva umkhiqizo idatha kungaba ngokugcwele noma ingxenye kuphazanyiswe. Ngenxa yalokho, uzibeka engcupheni inyumbazana nithenge ngaphandle kwemali nangaphandle imoto uma uzama ukubhalisa.
Ngalolo inothi efanayo
Ngezinye izikhathi ikhodi esifundeni digital kungenzeka ingafani iyunithi indawo, lapho idokhumenti utholiwe. Ngaphezu kwalokho, uma ipasipoti kwanikezwa amaphoyisa womgwaqo, kungenzeka ukuthi lokhu iyimpinda. Lokhu kwenzeka ngo-amaphesenti angu-90 amacala. Ngenxa yalesi sizathu, umthengi kuyomelwe uwaphule inombolo umshini TCP, ngakho musa uzisole engacabanganga yakhe. Futhi banake izimpawu ukukhwabanisa. Emakethe imoto kukhona TCP amafomu inkohliso, efana original, kanye ukulungiswa ezincane kokuqukethwe kwasekuqaleni. Uma ifomu ukuganga ngokugcwele, wenza ezingeni typographically okusezingeni eliphezulu. Kungase kube khona njengoba watermark.
Ngokuhlola ipasipoti lobuchwepheshe kufanele wasondela ukunakekela okukhethekile ngoba umshini Punch eenomborweni lokuphekiwe ifomu, kuyoba akunakwenzeka.
Lapho ukuthenga imoto kumele kube ukuvumelanisa idatha nge imoto
PTS. Yenza isenzo esinjalo kuyadingeka ngendlela elandelayo:
Qhathanisa elicacisiwe Isihloko inombolo yokubhalisa nge inombolo kazwelonke, ngokuvamile eqondiswa bumper wemoto.
Qhathanisa imodeli emelelwa imoto nalowo elicacisiwe ishidi idatha.
Hlola umbala imoto.
Qinisekisa inombolo umzimba, okuyinto kucacisiwe kule TCP futhi sanikeza imoto.
PTSD idokhumenti ubala zonke izici eyinhloko imoto, amakhodi ukuhlonza Izingxenye eziyisisekelo, idatha mayelana umnikazi, ukubeka usuku lokubhalisa nokususwa kuwo. Isikhathi esining impela kudinga ukuhlolwa ngokucophelela TCP njengoba Igumbi umshini Punch ngenye indlela ngezinye izikhathi akwenzeki.
Ikhishwe ngu Isihloko
Lapho uthenga imoto nge kubalulekile ukuthi ubani ngokuvamile ekhishwe PTAs. Okokuqala,
abakhiqizi ukwahlukana Automobile Ukuhlolwa MIA. Lokhu awasebenzi kuphela imishini eziye ekhishwe kuleli zwe, kodwa futhi nalabo zinikelwe. TCP ikhishwa phezu ukubhalisa imoto uma idatha ushintsho yokubhalisa.
Lapho i-passport ilahlekile noma isigugile, kuyakushiswa esikhishwe amasiko iziphathimandla uma ungenisa imishini zize kuleli zwe, uma imoto alibhalisiwe, kanye nezinhlangano-bezimoto engabhalisiwe futhi chassis. Kuzo zonke ezinye izimo, idatha amashidi emshinini ekhishwe amayunithi State Automobile Ukuhlolwa Wezangaphakathi.
Belarus Pripyat National Park: izithombe kanye nokubuyekeza
Yiziphi izindlela ucwaningo lwesayensi futhi Pedagogical
Amawele ka-Siam eRussia - Anya noTanya Korkina eminyakeni engu-26 kamuva
Cermet phambi amazinyo ukubuyekezwa. Prosthetics metal-: izithombe, izindleko